Soo dejisan Mamba 3.14 – Vessoft
Soo dejisan Mamba
Mamba – macmiilka ka mid ah mid ka mid ah goobaha shukaansi ugu caansan internet-ka. Mamba kuu ogolaanayaa inaad si ay u baadhaan dadka isticmaala, arkaan xogta gaarka ah, diro fariimo qoraal ah, sawiro aragtida, hadiyado dalwaddii iwm Mamba awood u si aad u eegto bogagga dadka isticmaala, oo ku yaal dhow, internetka ama dhawaan ka diiwaan gashan. Software waxaa ka mid ah muuqaal aad u aragtid martida ee page u gaar ah oo u eegto tirakoobka muddo cayiman. Mamba ayaa interface ku ogaado iyo fududahay in la isticmaalo.
Search Easy ee users
Exchange ee fariimaha qoraalka ah
Siinta hadiyadaha dalwaddii
Galitaanka of visitors of bog u gaar ah
Comments on Mamba:
Mamba Software la xiriira: